အသိသတိ - ဘ
ဘ အက္ခရာစဉ်ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဘကုန်း အက္ခရာခေါင်းစဉ်နဲ့ နာမည်များ
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်နေရင်း သတိဆိုတာ သတိအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်တစ်ခုကို အဆက်မပြတ် အမှတ်ရ ပေးနေရတာပါလားလို့ ဘွားခနဲ သိလိုက်တယ်။ ဖဿဆိုတဲ့ အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ချင်းထိတွေ့နေခြင်းဟာ အဆက်မပြတ် ဆက်တိုက် ထိတွေ့နေတာပါလားလို့ ဘွားခနဲ သိလိုက်တယ်။ ခံစားမှုဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာပါလားလို့ ဘွားခနဲ သိလိုက်တယ်။ သိမှုတွေဟာ သိပေးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း မရှိတော့ဘဲ နောက်ထပ်သိပေးမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြည့်စွက်ပြီး အဆက်မပြတ် သိပေးနေရတာပါလားလို့ ဘွားခနဲ သိလိုက်တယ်။ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းတဲ့ စေတသိက်ဟာ သိစရာကို သိပေးနေရတဲ့အသိနဲ့ သတိထားပေးရတဲ့ စိတ်တွေကို အလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင် အဓိကအကျဆုံး အသုံးချနေရတဲ့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်စိတ် ဖြစ်နေတာကို ဘွားခနဲသိလိုက်တယ်။ သတိကို အကျင့်စရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ထပ်ကာတလဲလဲ အားထုတ်နိုင်ရင် တစ်ခါတလေ မိမိက မလုပ်ဖြစ်တောင် သတိကအကျင့်ပါပြီး သိစရာကို သိပေးနေတာ ဘွားခနဲ သိလိုက်တယ်။ သိမှတ်စရာအာရုံနဲ့ သိမှတ်နေတဲ့အသိနဲ့ နှစ်ခုလုံး အချိုးညီညီ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် အတွဲလိုက် သာသာလေး ချုပ်ပျောက်နေတာကို သိမှန်းသိနေတဲ့ အသိကို ဘွားခနဲ တွေ့လိုက်တယ်။
- လုပ်ချင်လို့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှလာပြောမနေနဲ့တော့! သူဌေး! အိမ်ပြန်ပြီးသာ အနားယူ။ အလုပ်မပြီးမချင်း မနားဘူး။ မစားဘူး။ မခိုဘူး။ မကပ်ဘူး။ ဘွင်းဘွင်းပဲ။ မလုပ်ချင်လို့ ထိုင်နေရင်တော့ ဘာမှလာမခိုင်းနဲ့ မလုပ်ဘူး။ ရှင်းရှင်းပဲ။